Entecavir hydrate poda (209216-23-9) ≥98% | AASraw R&D Reagents
/ Products / MaR & D Reagents / Entecavir hydrate upfu
Rating: SKU: 209216-23-9. Category: MaR & D Reagents
MUTSVENE unobatanidzwa uye unokwanisa kugadzira kubva pa gramu kusvika kuhutano hwekupinda kweChipecavir hydrate powder (209216-23-9), pasi peCGMP murairo uye trackable quality control system.
Raw yakadzama Inecavir hydrate powder Basic Characters
Name: Entecavir hydrate powder
Molecular Kurema: 295.29
Yakasvibira Inecavir powder hydrate mukushandiswa
Inecavir hydrate Ushumiri
Entecavir powdered powder ndiyo yakakura ye deoxyguanosine nucleoside analog nemushonga untiviral inosarudza hepadnaviruses (EC50 = 3.7 nM pamusoro peswere ye hepatitis B (HBV) mumagariro e2.2.15 chiropa). In vitro, iyo inoshandiswa intracellular ye Entecavir hydrate yai yakasvibirira, Entecavir hydrate powder triphosphate, inoratidza hupamhi hunobatanidza HBV DNA polymerase kupfuura yepanyama guanosine triphosphate substrate uye inodzivisa zvakananga HBV DNA kudzokorora pamatanho e3 mumugwagwa wokudzorera: shanduro, uye DNA-inotarisirwa DNA yakafanana. Izvo zvinogona kubatsira kurapwa kweInecavir hydrate poda yakave yakaratidzwa muhuniki uye duck mhando dzeHBV. Basa rakagadziriswa muchikamu chekutanga chechipiri chechipiri cheIc II uye Entecavir powder powder yakagamuchirwa chibvumirano kubva kuU.S. Food and Drug Administration mukurapa kwevanhu vakuru vane chirwere chechipatara B.
Entecavir hydrate yai yakasvibira (ETV), inotengeswa pasi pezita reBaraclude, inorapwa nemishonga inoshandiswa mukurapwa kwehutachiona hweH hepatitis B (HBV). Mune avo vane HIV / AIDS uye HBV mishonga inorwisa mabhakitiriya inofanirawo kushandiswa. Entecavir powdered powder inotorwa nemuromo sehwendefa kana sarudzo.
Migumisiro inowanzowanzobatanidza misoro, kusuruvara, shuga yakakosha yeropa, uye kuora kwepfungwa. Matambudziko akaoma anosanganisira kuwedzera kwechiropa, kukwirira kweropa, uye chiropa chechiropa kana mishonga ikamira. Nepo apo inoratidzika kusina kukanganisa kubva pakushandiswa panguva yekudzivirira, kushandiswa uku hakuna kumbove kwakanyatsodzidza. Entecavir hydrate yai yakasviba iri mu nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) mhuri yemishonga. Iyo inodzivirira hutachiona hweH hepatitis B kubva pakuwedzera kuburikidza nekudzivisa reverse transcriptase.
Entecavir poda hydrate inonyanya kushandiswa kurapa chirwere chisingaperi chekushaya hepatitis B kutapukira kune vanhu vakuru uye vana 2 kwemakore uye yakakura nekushandura kwehutachiona hwehutachiona uye uchapupu hwehutachiwana hwehutachiwana hunokwidziridzwa muropa hwechiropa. Inoshandiswawo kudzivisa HBV kugadziriswa mushure mekuvhara chiropa uye kubata varwere vane HIV vane utachiona hweHBV. Entecavir hydrate yakasvibiswa haina simba nekurwisana neHIV, asi haisati yakurudzirwa kuti ishandiswe mune varwere vane HIV-HBV vane hutachiona hweHIV-HBV pasina hutachiona hwehutachiona hweHIV  sezvo zvingasarudza kushorwa ne lamivudine uye emtricitabine mune HIV.
Kubudirira kweChipecavir hydrate powder kwakadzidzwa mumitauro yakasiyana-siyana, twese-mapofu, miviri yakawanda. Entecavir hydrate powdered mouth is effective and generally well tolerated treatment.
Entecavir hydrate poda yakasviba inotorwa nemuromo sepiritsi kana mhinduro. Maitiro akavakirwa pahuremu hwemunhu. Mhinduro yacho inokurudzirwa kune vana vanopfuura makore maviri ekuberekwa vanorema kusvika makumi matatu makirogiramu Entecavir hydrate powder inokurudzirwa pane isina chinhu mudumbu maawa mashoma 2 usati kana mushure mekudya, kazhinji panguva imwechete mazuva ese. Haisi kushandiswa muvana vari pasi pemakore maviri ekuberekwa. Kugadziriswa kwedosi kunokurudzirwawo kune vanhu vane itsvo yakaderera basa.
Warning on the Entecavir hydrate powder
Ruzhinji rwevanhu vanoshandisa Pecavir powdered powder vane zvishoma zvisingabatsiri. Zvipembenene zvakanyanya zvinowanzobatanidza misoro, kuneta, dutu, uye kushungurudzika. Zvishoma zvishoma zvinowanzoitika zvinosanganisira dambudziko rokurara uye zviratidzo zvepamuviri zvakadai sedumbu, chirwere, uye kurutsa.
Zviremera zvinokonzerwa neInecavir hydrate poda yakasanganisira lactic acidosis, zvinetso zveropa, kuwedzera kwechiropa, uye mafuta muropa.
Kuongororwa kwebhizinesi kunogona kuratidza kuwedzera kwealanine transaminase (ALT), hematuria, glycosuria, uye kuwedzera kwe lipase. Periodic monitoring of hepatic function uye hematology inokurudzirwa.
Entecavir powdered powder is an analog synthetic of 2-deoxyguanosine nehutachiona hwehutachiona hwepatachiona hweH hepatitis B (HBV). Entecavir hydrate ris yaiviriswa inopiswa mu vivo kune 5-triphosphate metabolite. Uyewo, chimiro che triphosphate chinokwikwidzana nemasikironi e substrate deoxyguanosine triphosphate (dGTP) yekubatanidzwa muDNA yakawanda. Kubatanidzwa kweiyo yakagadzirirwa triphosphate metabolite yePececirir hydrate powder inhibits reverse transcriptase (RT) yeVRNA-inotenderera HBV DNA polymerase uye, nokudaro, kudzokorora kweDNA yakawanda uye kunyora.
Entecavir hydrate yai yaiita guanosine nucleoside analogue inoshandiswa mukurapa chirwere chepachipatara chepatachipatara cheBH (HBV). Entecavir hydrate therapeutic powder inogona kusanganiswa nemafuta e-hepatitis B iri pasi kana mushure mekurapa, asi haisati yakabatanidzwa kune zviitiko zvechipatara zvinokuvadzwa nechiropa.
Nzira yokutenga nayo Inecavir hydrate powder kubva kuAASraw